Local Celebrity News Archives - Nalonetardiary
“တေးသံသွင်းများမှ စီးရီးရောင်းရငွေ သိမ်းရတာ ညည အိပ်ရေးပင်ပျက်သည်” ဟု ဆိုရသည် အထိ အောင်မြင်ခဲ့သော အဆိုတော်တစ်ယောက် အကြောင်း
August 16, 2020 by Nalonetar Diary
“တေးသံသွင်းများမှ စီးရီးရောင်းရငွေ သိမ်းရတာ ညည အိပ်ရေးပင်ပျက်သည်” ဟု ဆိုရသည် အထိ အောင်မြင်ခဲ့သော အဆိုတော်တစ်ယောက် အကြောင်း စိုင်းထီးဆိုင်သည် မြန်မာပြည်တွင် ကျော်ကြားသော ရှမ်းလူမျိုး တေးရေးဆရာ၊ အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏ ဂီတခရီးတစ်လျောက်လုံးတွင် ရှမ်းဘာသာဖြင့် သီဆိုသော သီချင်းအယ်ဘမ် ၃ ခွေ မှ ၄ ခွေနှင့် ဗမာဘာသာဖြင့်သီဆိုသော သီချင်းခွေ ၃၀မှ ၄၀ အထိ ထွက်ရှိခဲ့သည်။ သူသည် ကန်ထရီးဂီတကိုသာ အထူးအသားပေး ရေးသားခဲ့လေသည်။ စိုင်းထီးဆိုင်နှင့်အတူ တေးရေးဆရာ၊ ဒေါက်တာ စိုင်းခမ်းလိတ်နှင့် သဘာဝရင်သွေးငယ် The Wild Ones အဖွဲ့သည်လည်း မန္တလေးအခြေပြုပြီး နိုင်ငံကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စိုင်းထီးဆိုင်ကို အဖဦးနန္ဒာ၊ အမိ နန်းအိန်တို့မှ (၁၉၅၀) ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ … Read more
Categories Careers, Local Celebrity News Tags စိုင်းထီးဆိုင်
သိန္းကိုးေထာင္လည္း မရဘူး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သားလည္း ကၽြန္ေတာ္ မသိဘူး ဟု ယုန္ေလးက ေျပာၾကား
August 7, 2020 by Nalonetar Diary
သိန္းကိုးေထာင္လည္း မရဘူး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သားလည္း ကၽြန္ေတာ္ မသိဘူး ဟု ယုန္ေလးက ေျပာၾကား သိန္းကိုးေထာင္လည္း မရဘူး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သားလည္း ကၽြန္ေတာ္ မသိဘူး ဟု အဆုိေတာ္ ယုန္ေလးက ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ ေန႔လည္ပုိင္းက ၄င္း ၏ အေကာင့္တြင္ Live လႊင့္ ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရုပ္ရွင္ အစည္းအရံုး ခန္းမ တြင္ ယေန႔ ညပုိင္း ၅ နာရီခွဲ အခ်ိန်တြင္ ရွင္းလုိေၾကာင္း ႏွင့္ ခန္းမကို အခမဲ့ ေပးသံုးရန္ လည္း ေျပာၾကားခဲ့ကာ မီဒီယာမ်ားကိုလည္း ေခၚထားသည္။ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး ဥကၠဌ ဦးညီညီထြန္းလြင္လည္း ရွင္းခ်ိန္တြင္ ရွိေပးရန္ Live တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး ဦးညီညီထြန္းလြင္ကို စိတ္မဆုိးေၾကာင္းလည္း … Read more
Categories Local Celebrity News Tags ယုန္ေလး
အဆိုတော်ယုန်လေးရဲ့ ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ သီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂယက်ရိုက်နေကြတာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးမြင်တွေ့ကြမှာပါနော်။ သီချင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေမရှိပေမယ့် MV သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ အပေါ်မှာ ဝေဖန်မှုတွေများစွာရှိနေတာကြောင့် အဆိုတော်ယုန်လေးကိုယ်တိုင် သူ့ဖေ့ဘုတ်ကနေပြီး စာနှင့်တစ်မျိုး Live လွှင့်ပြီးတစ်မျိုး ပရိသတ်ကြီးနှင့် အနုပညာရှင်တွေကို တောင်းပန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ဒီသီချင်း MV ရိုက်ကူးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကိုဗစ်စည်းကမ်းချက်တွေကို လိုက်နာမှုရှိ/မရှိ စိစစ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်း သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်ဦးဆောင်ပြီး OG Crew တွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ယုန်လေးအတွက် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာ တောင်းပန်ပေးဖို့ ရောက်ရှိနေပြီလို့ ယုန်လေးက သူ့ရဲ့ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကနေ ဖော်ပြလာပါတယ်။ “တော်တော်များများ အဆင်းဘီးတက်ပေးတဲ့ အချိန်မှာ မိတ်ဆွေ စစ် . အတု သိခွင့်ရလိမ့်ပါတယ် .ကိုအယ်ကြီး နှင့် ပါဝင်သူညီ ညီမငယ် အစ်ကို . အစ်မ … Read more
Categories Local Celebrity News Tags မြင့်မြတ်
အဆိုတော် ယုန်လေး ဒါရိုက်တာ အနေနဲ့ ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ “ ငါတို့ အားလုံးရဲ့မြေ (စည်းလုံးသင့်ပြီ မြန်မာပြည်)” သီချင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ကာရိုက်တာအနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ညီနန္ဒဟာ အဲဒီသီချင်းမှာ ပါဝင်ဖြစ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလိုပဲ ဆိုပါတယ်။ “ကျနော် ဒီ Music Video နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယုန်လေး စကမ်းလှမ်းချိန်မှာ ယုန်လေးက သီချင်း အရင် နားထောင်ကြည့်ပါ။ သီချင်းရဲ့ ပေးချင်တဲ့ Mes sageက ကောင်းပါတယ်။ အားလုံး စည်းလုံးဖို့ ဆိုတော့ ကျနော်တို့လည်း သရုပ်ဆောင်ဆိုတော့ အနုပညာအမြင်နဲ့ မြင်ကြည့်တယ်” “ကျနော်က ယုန်လေးကို မေးတယ်။ ကျနော် ဘယ်နေရာက … Read more
Categories Local Celebrity News Tags ညီနႏၵ
နိုင်ငံရေးကို ဘယ်တော့မှ မပတ်သက်တော့ဘူးလို့ ဖွင့်ဟလိုက်ပြီး M T V သီချင်းကို ပြန်လည် ဖြုတ်ချသွားမယ့် အဆိုတော်ယုန်လေး လက်ရှိမှာ ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ..(စည်းလုံးသင့်ပြီ မြန်မာပြည်) M T V သီချင်းကြောင့် ဝေဖန်မှုခံနေရတဲ့ အဆိုတော်ယုန်လေးဟာ သူ့အနေနဲ့ အခုအချိန်မှာ MTV သီချင်းကြောင့် ရိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကြောင့် စိတ်ဓာတ်တအားကျနေခဲ့ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုတော်ယုန်လေးအနေနဲ့ အနုပညာအပေါ် ရူးသွပ်မှုတစ်ခုတည်းကိုဦးတည်ပြီး သီချင်းကို ဖန်တီးခဲ့တာလို့ ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ နောက်ကွယ်မှာ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ စေခိုင်းတာမျိုး မရှိသလို ပိုက်ဆံတပြားတချပ်ကိုမှ မယူဘဲ အနုပညာရူးသွပ်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့သာ သီချင်းကို ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုတော်ယုန်လေး ဖန်တီးခဲ့တဲ့ M T V သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုအခါမှာ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေအကြားမှာ … Read more
Categories Local Celebrity News Tags ယုန်လေး
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ မီးမီးခဲ က်န္းမာေရအေျခအေန
July 22, 2020 by Nalonetar Diary
မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့နေပြီ လို့ ဆရာဝန်တွေ ရဲ့ အသိပေးခြင်း ကို ခံလိုက်ရပြီ ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်မီးမီးခဲ ရဲ့ ကျန်းမာရေး …. အဆိုတော် မီးမီးခဲ ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ စိုးရိမ်နေရ အဆိုတော်မီးမီးခဲ ကတော့ ကင်ဆာရောဂါ ကို ပြင်ထန်စွာ ခံစားနေရတဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်သန်မာသူပီပီ ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နေခဲ့ပြီး တေးသီချင်းသီဆိုမှုနဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲများကိုတောင် ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေက ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသေးတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အဆိုတော်မီးမီးခဲ ရဲ့ ကင်ဆာရောဂါ အခြေအနေက ဆရာဝန်တွေတောင် မျှော်လင့်ချက် ကင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ အသိပေးထားပါတယ်။ အဆိုတော်မီးမီးခဲအနေနဲ့ ရင်သားကင်ဆာ အဆင့် ၄ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကစတင်ခံစားရပြီး၊အရိုးထဲကိုပြန် နှံ့သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီရောဂါကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ ဓာတ်၇ခါနဲ့ ကီမို ၅ … Read more
Categories Local Celebrity News Tags အဆိုတော်မီးမီးခဲ
ဦးကိတ္တိသာရ၊ သက်တော် ( ၇၃) နှစ် (သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ကျော်ဟိန်း) ပျံလွန်တော်မူ
July 11, 2020 by Nalonetar Diary
ဦးကိတ္တိသာရ(သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ကျော်ဟိန်း)ပျံလွန်တော်မူ ဦးကိတ္တိသာရ၊ သက်တော် ( ၇၃) နှစ် ကွယ်လွန် ရုပ်ရှင်လောကရဲ့သဘာဝမင်းသားကြီးကျော်ဟိန်းတစ်ယောက် ယနေ့မနက်ပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ လူသားအားလုံးကိုလေးစားပါတယ် လို့ အမြဲဆိုတက်တဲ့ ဦးကိတ္တိသာရ (နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အကယ်ဒမီ ဦးကျော်ဟိန်း) ကတော့ ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ၂၇ မိနစ် အချိန်တွင် ဩစတေးလျနိုင်ငံ၊ ကင်မ်ဘာရာမြို့တွင် ပျံလွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်ပါသည်… သရုပ်ဆောင်မျိုးဆက်သစ်များစွာကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်သလိုသဘာဝကျလွန်းအိုက်တင်တွေကြောင့်အောင်မြင်မှုများစွာနဲ့ကျော်ဟိန်းတစ်ခေတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် မင်းသားကြီးကျော်ဟိန်းဟာ ကျန်ရှိတဲ့သက်တမ်းမှာလည်း ရဟန်းဘဝအဖြစ်ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တာလည်း ့ဖြစ်ပါတယ် ကျော်ဟိန်းကိုအားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဝမ်းနည်းစရာသတင်းအဖြစ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက် ၃ ရက်မြောက်ဖြစ်သည့် ဇူလိုင် ၁၄ သည် ဆရာတော် ၏ ၇၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဖြစ်ပါသည်။ 8days_TV Zawgyi ဦးကိတၱိသာရ(သ႐ုပ္ေဆာင္ … Read more
Categories Local Celebrity News Tags ေက်ာ္ဟိန္း
ေအာင္လ အန္ဆန္မွာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြ႕ရွိ
July 3, 2020 by Nalonetar Diary
MMA ကစားသမား ျမန္မာ့စပါးအုံးလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ကခ်င္လက္ေဝွ႔သမား ေအာင္လ အန္ဆန္မွာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ရွိေနတာကို အတည္ျပဳစစ္ေဆးေတြ႕ရွိတယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ဒီလိုတင္ထားပါတယ္ ။ Dear family and friends, I got tested for covid-19 on Monday and the result came back today and I am positive. So my family and I will be quarantining ourselves for the next 14 days. I hadaslight fever, … Read more
Categories International Celebrity News, Local Celebrity News, Local News Tags ေအာင္လ အန္ဆန္
စာေရးဆရာ ႏြမ္ဂ်ာသိိုင္း ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ကြယ္လြန္
June 27, 2020 by Nalonetar Diary
စာရေးဆရာ နွမ်ဂျာသိိုင်း ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ဆုံးပါးသွားပြီ ရန်ကုန် ဇွန် ၂၇ ကျွန်တော် ဆရာစာအုပ်တော်တော် များများဖတ်ပီး စာဖတ်ခြင်း အလေ့ကို ရခဲ့သူမို့ စိတ်ထိခိုက်မိပါတယ်။ ဆရာနွမ်ဂျာသိုင်း ပင်လုံဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်သွားပါပြီ စာရေးဆရာနွမ်ဂျာသိိုင်း သည် ယနေ့ ၂၇-၆-၂၀၂၀ နေ့လယ်၁၂နာရီ၁၅မိိနစ်အချိန်တွင် ပင်လုံဆေးရုံ၌ ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြောင်း သိရှိရသည်။ ဆရာ ကွယ်လွန်သွားခြင်းအတွက်် မိသားစုနှင့်ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း ဆရာ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ ။ ကောင်းကင်သစ်် Zawgyi စာေရးဆရာ ႏြမ္ဂ်ာသိိုင္း ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ဆုံးပါးသြားၿပီ ရန္ကုန္ ဇြန္ ၂၇ ကြၽန္ေတာ္ ဆရာစာအုပ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဖတ္ပီး စာဖတ္ျခင္း အေလ့ကို ရခဲ့သူမို႔ စိတ္ထိခိုက္မိပါတယ္။ ဆရာႏြမ္ဂ်ာသိုင္း ပင္လုံေဆး႐ုံႀကီးမွာ ကြယ္လြန္သြားပါၿပီ စာေရးဆရာႏြမ္ဂ်ာသိိုင္း သည္ … Read more
Categories Local Celebrity News, Local News Tags နွမ်ဂျာသိုင်း